FADEEXAD CULUS:Cali Khaliif & Xaaskiisii oo Hargeysa looga haysto qarash badan & Muuse Biixi oo diiday in uu ka bixiyo | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Iyadoo bishii hore ee October uu gaadhay hogaamiyaha maamulka Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galaydh magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaliya isla markaasna warar kala duwan ay kasoo baxayeen safarkiisa Muqdisho ayaa waxaa haatan banaanka timid arin cusub.
Dr. Galaydh oo inta uusan tagin Muqdisho ku sugnaa wakhti dheer gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa kula sugnaa isla Hargeysa xaaskiisa iyo wiil la sheegay in uu ahaa xoghayaha Cali Khaliif, kuwaas oo deganaa Hotelka Mansoor ee magaalada Hargeysa.
Dalab ka yimid dhanka Galaydh ayaa waxaa lagu faray xaaska Cali Khaliif iyo wiilka xoghayaha u ahaaba in ay iskaga soo tagaan magaalada Hargeysa si ay u yimaadaan magaalada Muqdisho oo haatan hawlo kala duwan uu kawado Cali Khaliif Galaydh, hasa yeeshee masuuliyiinta Hotel Mansoor ayaa sheegay in aysan ka bixi karin labadan shakhsi magaalada Hargeysa ilaa ay ka bixinayaan qarash uu ku lahaa Hotelku kaas oo dhan ilaa 4000 oo Dollar.
Arintani oo sababtay khilaaf xoogan iyo xiisad hor leh ayaa waxaa ugu dambeyntii kusoo biiray gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe iyo Wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin oo nugul warqad ah u diray Wasaaradda Maaliyadda Somaliland si ay u bixiso qarashkaasi.
Wasiirka Maaliyadda Somaliland Sacad Cali Shire oo ay gaadhay nuqulka warqada ka timid Waraabe iyo Kaahin ayaa isna dhankiisa sheegay in uusana xaq u lahayn bixinta qarashkaasi isla markaasna uu lahayn awood uu ku saxiixo bixinta qarashka Hotel Mansoor ee Hargeysa sababo la xidhiidha madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo xayiraad ka saaray awoodihiisii qaarkood, taas badalkeedna ay madaxweyne Biixi gaadhsiiyaan dalabkooda si uu u fududeeyo isagu.
Gudoomiye Waraabe iyo Wasiir Kaahin oo si weyn uga cadhooday arintaasi ayaa si deg deg ah ku tagay madaxtooyada Somaliland ee magaalada Hargeysa si ay Biixi ugala hadlaan arintani, hasa yeeshee madaxweyne Biixi ayaa la sheegay in dhagaha ka furaystay fududaynta dalabkaasi kadib markii uu si cad u sheegay in hogaamiye Galaydh uusan ka bixinay wax qarash ah maadaama uusan Cali Khaliif u iman Hargeysa ujeed uu ugu yeedhay Biixi ee uu u joogay danihiisa siyaasadeed.
Cali Khaliif Galaydh oo ay gaadhay arintani ayaa dhankiisa sheegay in uu fal celinayo oo uu isagu iska bixinayo qarashka Hotelkii uu ka deganaa Hargeysa isla markaasna uu go’aan ka gaadhi doono arimaha Hargeysa.
Wali lama oga Mr. Galaydh waxyaabaha uga qabsoomay Muqdisho hasa yeeshee waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowladda, kuwaas oo dhankooda haatan faa’iido weyn u arka tagitaankiisa Muqdisho si uu qayb uga noqdo arimaha haatan socda oo la sheegay in dib u habayn loogu samayn doono maamulkiisii Khaatumo.
Previous articleDAAWO VIDEO:Lamaanihii dartood loo dilay Axmed Dowlo oo ‘halis wajahaya’
Next articleDiyaarad Muqdisho Kusii Jeedey oo Hawada Sare Cilad Ku Qab Satay